ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းခွေး - ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဇာစ်မြစ်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုများကိုသိရှိရန် Dogs World
Lurdes Sarmiento | | ခွေးမျိုးဆက်များ
ခွေးအမျိုးအစားအားလုံးသည်သူတို့၏ထူးခြားမှုရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်သူတို့၏မျိုးရိုးဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ The ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းခွေးသည်ကော့ကေးဆပ်ဒေသမှဇာတိဖြစ်သည်.
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် နိမ့်သောအပူချိန်ကနေကာကွယ်နိုင်စွမ်းတဲ့အင်္ကျီကိုတီထွင်ခဲ့သည် နှင့်သင်၏ထိန်းကျောင်းမှုကုန်သွယ်မှုမှသင်ခံစားရစေခြင်းငှါအသုံးအများဆုံးဒဏ်ရာများ။ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသားအရောင်သည်အလွန်ခွန်အားရှိပြီး၎င်းသည်တည်ရှိသည့်အကြီးဆုံးခွေးများအကြားတွင်ရှိသည်။
အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူကော့ကေးဆပ်ခွေးမျိုးကွဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သော်လည်း, လက်ရှိ ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်း၏အမည်ဖြင့်မျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုသာအသိအမှတ်ပြုသည်။
Russian Kennel Club သည်ရုရှားဘာသာပြန်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည် Ovcharka sheepdog, မျိုးဆက်ကိုလည်းအနောက်ပိုင်းဒေသတွင်း၌လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အတူအမည်။ ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းသည်တောင်ရုရှားသိုးထိန်းနှင့်အာရှအလယ်ပိုင်းသိုးထိန်းအဖြစ်လူသိများသောရုရှားသိုးထိန်းများ၏သုံးစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ဤထူးခြားသောခွေး၏မူလအစသည်အတန်ငယ်မသေချာမရေရာဖြစ်နေပြီးမျိုးရိုး၏မူလအစကိုတိဗက်မာစတိဖ်ခွေးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟုကောလာဟလသာဖြစ်သည်။ မငြင်းနိုင်သောအရာမှာ၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် နွားထိန်းသူနှင့်သိုးထိန်း ၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အသွင်အပြင်, အစွမ်းသတ္တိနှင့်အနိမ့်သောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်မှကျေးဇူးတင်စကား။
အနောက်တိုင်းခွေးပြပွဲတွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသည့်ခွေးသည်ဂျာမနီရှိ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များမှစတင်ခဲ့သည်။ အမှန်တရားကတော့ ဒါကဒီကဗျာရှေးခေတ်ဖောက်ဖြစ်ပါတယ် ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများ၏။ ကျိန်းသေသည်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ခက်ခဲသောလူနေမှုအခြေအနေများနှင့်အတူနယ်မြေ, အမျိုး၏မျိုးဗီဇဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ရှုထောင့်ကနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခွေးရဲ့ကိုက်သည်ခွေးတစ်ကောင်ကမ္ဘာမှာသြဇာအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကြီးစွာသောကိရိယာသည်သင်၏အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည် မယုံနိုင်လောက်အောင်အကာအကွယ်ဇာတ်ကောင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်စိတ်ထား.
ဒါဟာနေရာအားလုံးနှင့်ပိုင်ရှင်မဆိုအမျိုးအစားများအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခွေးအမျိုးအစားကိုမွေးဖွားဖို့ဆုံးဖြတ်သူတွေကသူတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားရမယ် ဝိသေသလက္ခဏာများ, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကို။ သင့်ကိုယ်သင်မှန်မှန်ကန်ကန်သင်ကြားမယ်ဆိုရင်သင့်မှာသစ္စာရှိပြီးအကာအကွယ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။
ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းခွေးများ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သူတို့မှန်ကန်စွာကြီးပြင်းလာပါက သူတို့သည်ကျန်းမာ။ နှစ်ရှည်လများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသားအရေနှင့် ပတ်သက်၍ အရိုးများနှင့်ကြွက်သားများရှိသည်။
နှာခေါင်းနှင့်နှာခေါင်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ နားရွက်များသည်တြိဂံများရှိပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆွဲထားတတ်ပြီးလက်ရှိနားရွက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ ဦး ခေါင်းကကြီးမားသည်.
၎င်းတို့ကိုdogsရာမခွေးများဟုသတ်မှတ်ကြသောကြောင့်၎င်းခွေးများ၏အရွယ်အစားမှာအတော်အတန်ကြီးမားသည်ဟုယူဆရသည်။ အမြင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပျမ်းမျှ 70 စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်စပ်ကြားကွာခြားချက်ရှိသည်။
အထီးအနိမ့်အမြင့်သည် ၆၅ စင်တီမီတာနှင့်အမျိုးသမီးအတွက် ၆၂ ဖြစ်သည် အများဆုံးအမြင့်အဘို့, အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ကန့်သတ်ရှိသေး၏။ အထီးကပိုကြီးပြီး ၇၅ စင်တီမီတာနှင့်အမျိုးသမီး ၇၀ အထိတိုင်းတာနိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားနဲ့ကြွက်သားတွေကြောင့်ကော့ကေးဆပ်ခွေးတွေကတော်တော်လေးလေးတယ်။ အမျိုးသမီးများသည်ကီလိုဂရမ် ၅၀ ထက်ပိုများသည် အထီး 70 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်နှင့် 90 အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အလေးချိန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ မျိုးရိုး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။
အင်္ကျီနှင့် ပတ်သတ်၍ မျိုးသုံးမျိုးရှိသည်။ ရှည်သောတိုတိုနှင့်အလတ်စားဆံပင်။ အမျိုးအစားသုံးမျိုးလုံးအတွက်ဆံသားသည်သိပ်သည်းချောမွေ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်အအေးရာသီဥတုများ၌အကာအကွယ်ပေးသည့်ပိုမိုပေါ့ပါးသောသိုးမွှေးအင်္ကျီများရှိသည်။
ပိုင်ရှင်များကဤရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာသည်အခြေခံကျသည်။ ရာစုနှစ်များအတွင်းဤခွေးသည်တိရိစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လမ်းပြခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏ပင်ကိုအရည်အသွေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအကြောင်းကြောင့်, ၎င်း၏ပိုင်ရှင်သည်အထုပ်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချရမည် alpha ဖြစ်လာပြီးအဲဒါအတွက်သင့်မှာဗဟုသုတရှိရမယ်။
ပိုင်ရှင်သည်တိရစ္ဆာန်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်တိကျသောကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်။ ပိုင်ရှင်သည်တိရစ္ဆာန်အားထိန်းချုပ်မှုကိုပြခြင်းဖြင့်လေးစားပြီးနာခံရမည်။ ဒီထိရောက်စွာဖြစ်ပေါ်လျှင် ပိုင်ရှင်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားပြတ်တောက်သောနှောင်ကြိုးကိုဖန်တီးမည်.
၎င်းသည်ထိရောက်စွာဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုသိသင့်သည် ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းသည်ပင်ကိုအသိစိတ်ရှိသည့်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် အကယ်၍ သူသို့မဟုတ်သူ၏မိသားစုကိုစွန့်စားစားရန်စဉ်းစားပါကသူသည်မိမိပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့်အတိုင်းပြုမူလိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်တိရိစ္ဆာန်နှင့်မသက်ဆိုင်သောသူများအနေဖြင့်အကွာအဝေးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အစွမ်းထက်သောအကိုက်ခံရသည်ကိုမေ့ထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်ကလေးများနှင့်ဆက်ဆံရေးသည်အန္တရာယ်ကင်းသည် သူတို့၏သဘောသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုအန္တရာယ်များဟုမယူမှတ်ဘဲသူတို့၏ပိုင်ရှင်များကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဤတိရိစ္ဆာန်များကိုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မထမြောက်စေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, သင်မှာအားလုံးရိုင်းဇာတ်ကောင်အားပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့သည်နာခံမှုရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အကာအကွယ်ပေးသည့်အသိစိတ်ကိုလေးစားရမည်။ သိုးထိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းတစ်ပါးသည်သိုးအုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သောဝံပုလွေနှစ်ကောင်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
သူ၏အလေးချိန်နှင့်ကြွက်သားများရှိနေသော်လည်း သူတို့ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်သွက်လက်ဖြစ်ကြသည် နှင့်သူတို့၏သားမွေးများသည်သူတို့ကိုရာသီဥတုမှကာကွယ်ရုံသာမကကိုက်ခဲခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးသည်၊ အကြောင်းမှာထူထဲနေခြင်းကြောင့်ရန်သူ၏သွားများအရေပြားသို့ရောက်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
ကော့ကေးဆပ်ခွေးသည်အကြမ်းမဖက်သောဂုဏ်သတင်းရှိသော်လည်းငြင်းဆို။ မရနိုင်ပါ။ သူ့မိသားစုကြီးစွာသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအပ်နှင်းထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီး၎င်း၏တာ ၀ န်ကိုထိထိရောက်ရောက်ထမ်းဆောင်သည်။
အရေးကြီးသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့စွမ်းအင်ဖြုန်းဖို့အာကာသလိုအပ်ပါတယ်အခြားလူမျိုးများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းတွင်၎င်းတို့သည်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးလွတ်လပ်ပြီးရုတ်တရက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မြို့ပြခွေးမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာမြို့ပြနေရာများတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အကျင့်စရိုက်၏အပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်များကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
၄ င်းတို့လိုက်နာသင့်သောအဟာရနှင့်အနာရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်ဆရာ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည် တင်ပါးဆုံရိုး, တံတောင်ဆစ်နှင့်နှလုံး dysplasia။ တိရစ္ဆာန်အစားအစာများကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကိုအလွန်သြဇာညောင်းခြင်းကြောင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
ပုံမှန်စောင့်ရှောက်မှုတွင်ကာကွယ်ဆေးများကိုလည်းလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ သင့်လျော်သောတူရိယာဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်တိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ သဘာဝနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်မည်သည့်ကပ်ပါးကောင်မျိုးကိုမဆိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အချိန်မီဂရုစိုက်ရမည်။
ဒီခွေးမျိုးကိုကြိုက်လား ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့ လိုက်၍ သင်နှင့်ဤမျိုးဆက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » ကော့ကေးဆပ်သိုးထိန်းခွေး
ကျွန်တော်လှိမ့်မသွားဘူး ကျွန်တော့်ခွေးဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့တင်ပါးကိုထိလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ကုသမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးသူတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာသူဟာထပ်မံဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးယခုသူ့ကိုငါ mascosana cissus ပေးပြီးကတည်းကသူဟာလအနည်းငယ်အထိကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ဒါကမယုံနိုင်စရာပါပဲ၊ VET တောင်မှအံ့အားသင့်သွားတယ်။
Lurdes Sarmiento ဟုသူကပြောသည်
ငါတို့အရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်ကိုဘာပေးရမယ်၊ မပေးရမယ်ဆိုတာကတစ်ယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာပဲဆိုတာသတိရရမယ်။
ငါတို့အရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမယူသင့်ဘူး၊ မသောက်သင့်ဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့вет ၀ တ်ဆရာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသတိရရမယ်။